Izinkinobho eziyi-16 zensimbi yekhiphedi engafakwanga efakwe kuphrojekthi yekhabethe lephasela-Izindaba-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Izinkinobho eziyi-16 Zekhiphedi Engagqwali ezifakiwe Kwiprojekthi yeParcel yeKhabhinethi
Isikhathi: 2020-08-19 Hits: 47
Intelligent iphasela ikhabethe uhlelo, kufaka phakathi ikhompyutha yezimboni, exhunywe nge 16 Izinkinobho Engagqwali yekhiphedi, Isithwebuli sekhodi ye-QR, isikrini sokuthinta, iphrinta yekhodi ye-QR, ibhodi yokulawula ukukhiya ngogesi, iseva; Ibhodi yokulawula ukukhiya ye-elekthronikhi ifakwe kwikhabethe Ilokhi ye-elekhthronikhi ixhunyiwe, iseva ixhunyiwe kwisiginali esekhompyutheni ye-WEB noma yeselula ye-APP.
Kungani kunamakhabethe amaningi kakhudlwana ayafakwa futhi asetshenziswe?
Qeda ukulethwa okuningi okubangelwa abamukeli ukuphuma, futhi uthuthukise ukusebenza kahle kokulethwa kwezinkampani ezivezayo.
Ubumfihlo nokuphepha komuntu siqu komthumeli nomamukeli kuvikelwe, futhi kulula ukuthi umthumeli nomamukeli bathumele futhi bathathe nganoma yisiphi isikhathi.
Abasebenzisi bangazigcina okwesikhashana izinto ezingahambisani kahle nokuphatha lapho uhamba kwikhabethe lephasela elihlakaniphile, bese uzihambisa lapho kufanele.
Abasebenzisi akudingeki ukuthi balayini ku-terminal ukuze bangene futhi bakhokhe. Bangabeka ama-oda futhi bakhokhe ngokusebenzisa i-WEB yekhompyutha noma i-APP yeselula, begwema inkinga yokuminyana.
Kuyo yonke inqubo yokuthumela, ukusabalalisa nokwamukela, imininingwane yomthumeli nomamukeli ihlale ihlanganiswe ngendlela yekhodi ye-QR, evikela ngempela ukuvuza kwemininingwane yomsebenzisi futhi yenyuse ukusebenza kahle kokulethwa kanye neveni.
Ungathini Nge-Xianglong eyenziwe ngezifiso Yekhiphedi Engagqwali?
Izihluthulelo ziqoshwe nge-laser, ngakho-ke okhiye abasoze banyamalala kancane kancane ngenxa yesikhathi eside sokusetshenziswa.
Iphaneli nezinkinobho zenziwe ngensimbi engagqwali engu-304, enekhono eliqinile lokulwa nokulimaza.
Impilo yesevisi ≥ izikhathi eziyizigidi ezimbili
Ikhiphedi ayi-IP67 engenamanzi, i-anti-drilling, ne-anti-disassembly.
Okwedlule: Izikhiye ze-4x4 16 zokhiye zensimbi ezifakwe Kwizixhobo Zeseluleki Esingamaselula
Okulandelayo: Kungani Amajele Aphindisela Ukuvakasha Ngezingcingo Zevidiyo?